Powder Shiinaha Bentonite ee timaha / wejiga / ilkaha Warshadaynta iyo Warshadda | Xinzheng
budada dhoobada bentonite waa macdan aan macdan ahayn oo leh montmorillonite oo ah qaybta macdanta ugu weyn. Qaab-dhismeedka montmorillonite waa 2: 1 qaab dhismeed crystal ah oo ka kooban laba silikoon-oxygen tetrahedrons iyo lakabka aluminium-oksijiin octahedrons. Waxaa jira tibaaxo gaar ah oo ku jira qaab -dhismeedka lakabka ah, sida Cu, Mg, Na, K, iwm, iyo is -dhexgalka cations -kan iyo unugga montmorillonite waa mid aan degganayn, wayna fududahay in lagu beddelo cations kale, markaa wuxuu leeyahay isweydaarsi ion wanaagsan. Dalalka shisheeye ayaa lagu dabaqay in ka badan 100 waaxood oo ku yaal 24 aag oo wax soo saarka warshadaha iyo beeraha ah, waxaana jira in ka badan 300 oo badeecadood, sidaa darteed dadku waxay ugu yeeraan “ciidda guud”.
Horudhaca budada dhoobada bentonite
budada dhoobada bentonite waa macdan aan macdan ahayn oo leh montmorillonite oo ah qaybta macdanta ugu weyn. Qaab-dhismeedka montmorillonite waa 2: 1 qaab dhismeed crystal ah oo ka kooban laba silikoon-oxygen tetrahedrons iyo lakabka aluminium-oksijiin octahedrons. Waxaa jira tibaaxo gaar ah oo ku jira qaab -dhismeedka lakabka ah, sida Cu, Mg, Na, K, iwm, iyo is -dhexgalka cations -kan iyo unugga montmorillonite waa mid aan degganayn, wayna fududahay in lagu beddelo cations kale, markaa wuxuu leeyahay isweydaarsi ion wanaagsan. Dalalka shisheeye ayaa lagu dabaqay in ka badan 100 waaxood oo ku yaal 24 aag oo wax -soo -saarka warshadaha iyo beeraha, waxaana jira in ka badan 300 oo badeeco, sidaa darteed dadku waxay ugu yeeraan "ciidda guud".
Codsiga budada dhoobada bentonite
1. Ku -daridda budada dhoobada bentonite wax -soo -saarka dhoobada waxay kordhisaa baaxadda iyo xoogga jirka uurjiifka ama dhaldhalaalka, waxay si weyn u kordhisaa saamaynta saliidaynta, waxayna faa'iido u leedahay kubbadda wax lagu shiido. Intaa waxaa dheer, hakinta iyo xasilloonida ayaa si weyn loo xoojiyaa, galaasku waa jilicsan yahay, midabka midabkiisu waa jilicsan yahay, iyo dhaldhalaalka Mashiinku waa mid siman, oo leh gudbinta iftiinka wanaagsan, ka hortagga shilka, wuxuuna leeyahay xoogaa xoog farsamo.
2. Dhismaha qodista iyo qoditaanka, budada dhoobada bentonite waxay leedahay ganaax fiican, thixotropy, luminta shaandhaynta oo yar, wax-qabad-samaynta wanaagsan, diyaarinta habboon, hagaajinta fudud ee cufnaanta gaarka ah ee dheecaanka qodista, iwm. ceelka qoto dheer iyo wax injineernimada qodista badda.
Hore: Miisaska Dhagaxa ee casriga ah ee Sintered ee qiimaha qurxinta guriga
Xiga: hawo qallalan budada dhoobada dhoobada ee iibka ah
Soo -saareyaasha budada perlite ee Shiinaha oo la ballaariyay
Bacriminta Zeolite Qaboojiyaha ciidda Zeolite ee ...
1.6 ~ 2.5mm shaandho molecular Zeolite 3a 4a 5a stru ...
hawo qallalan budada dhoobada dhoobada ee iibka ah